LA OGAADAY: Labadii Sababood Ee Xavi Hernandez Uu Ku Diiday Inuu Noqdo Tababaraha Barcelona Ka Hor Intii Aan La Magacaabin Quique Setien | Laacib.net
LA OGAADAY: Labadii Sababood Ee Xavi Hernandez Uu Ku Diiday Inuu Noqdo Tababaraha Barcelona Ka Hor Intii Aan La Magacaabin Quique Setien
Barcelona ayaa wada-hadallo guul-darraystay la yeelatay halyeygeedii hore ee Xavi Hernandez maalintii Jimcihii ee usbuucan ka hor intii aanay shaqada ka caydhinin tababare Ernesto Valverde, waxaanay wada-hadalladaasi ku qotomeen in Xavi ay ku qanciyaan in uu noqdo macallinka shaqada ka beddelaya Valverde.
Xavi oo hadda ah tababaraha kooxda reer Qatar ee Al-Sadd ayaa waxa uu la kulmay masuuliyiin uu hoggaaminayey Eric Abidal oo ka socday Barcelona, kuwaas oo doonayey inay ka dhaadhiciyaan in uu la wareego kooxda marka la caydhiyo Valverde, hase yeeshee waxa ay kala kulmeen weji gabax kaddib markii uu Xavi u sheegay in aanu waqtigan diyaar u ahayn inuu shaqadaas qabto.
Khabiirka ciyaaraha Guillem Balague oo u dhashay waddanka Spain, kana mid ah qoreyaasha BBC Sports, ayaa waxa uu sheegay laba arrimood oo Xavi uu ku diiday shaqada tababarenimada Barcelona ee waqtigan, taas oo keentay in kooxdu u leexato dhinaca Quique Setien.
“Wada-hadalku wuxuu dhacay maalin kaddib guul-darradii Spanish Super Cup ee Atletico. Inkasta oo ay jireen shakiyo bilo soo taagnaa oo ku saabsanaa mustaqbalka Valverde, waxa jiray arrimo siyaasadeed oo u dhexeeyey Xavi iyo kooxdiisii hore oo ay ka socdeen Agaasimaha fulinta Oscar Grau iyo agaasimaha ciyaaraha Erik Abidal. Waxay inna xasuusisay wixii dhacay markii ay kooxdu isku dayday inay dib ula soo saxeexato Neymar ee haddana aanay saminin.” Ayuu yidhi Guillem Balague.
Khabiirku waxa uu intaa kaddib sharraxay laba arrimood oo sababay go’aanka diidmada Xavi, waxaanu yidhi: “Wuu ku dhibaatooday go’aan qaadashada, sababtoo ah waxa soo dalbatay kooxdii uu jeclaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay in aanu ku qancin waxa ay ka doonayaan.
“Laba arrimood ayaa ku hoggaamiyey inuu iska diido dalabka: Xaaladda aan degganayn ee doorashada madaxweynaha kooxda ee dhacaysa 2021 iyo imaatinka murashaxa Victor Fort oo hore shaaca uga qaaday in haddii uu guuleysto uu tababaraha cusub ee kooxda ka dhigi doono Xavi. Dad badan waxay rumaysan yihiin in runtii uu Xavi go’aansaday in nidaam cusub uu kooxda ka bilaabmo haddii dhiig cusub yimaaddo sida Font.
“Sidoo kale, Xavi wuxuu u baahday waqti uu ku fikiro. Wuxuu rumeysan yahay in xagaaga soo socda ay noqon lahayd waqtiga ugu habboon ee uu qaban lahaa shaqada, markaas oo uu qorshayn karayo in uu keeno dadka uu ku kalsoon yahay.”
Liiska Cadowga Uu Sameystay Tababaraha Cusub Ee Barcelona Quique Setien Oo La Shaaciyay
Maxay Aheyd Fariintii Uu Lionel Messi U Diray Tababarihii Laga Ceyriyay Barcelona Ee Ernesto Valverde?